Web Accessibility - Spiceworks Myanmar
ညီမကတော့ မဆုရည်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Spiceworks Myanmar မှာ Web Designer အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Web အသုံးပြု ခြင်း အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Web အသုံးပြုဆက်သွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပညာရေး ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဖျော်ဖြေရေး စသည်ဖြင့် မည်သည့် နယ်ပယ်တွင်မဆို မည်မျှပင် စွမ်းရည်ရှိသူ ဖြစ်စေကာမူ သတင်းအချက်အလက်များကိုတူညီစွာရယူပိုင်ခွင့် ရှိစေရန် Web Technology နည်းပညာ ဖြင့် Service ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကိုတန်းတူ တူညီအခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့် မသန်စွမ်းသူများလည်းလူ့အဖွဲ့ အစည်းတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်စေပါတယ်ရှင့်။
What you can do with Web Coding?
ယနေ့ ခေတ်တွင် Website အသုံးပြုမှုများ ပိုမိုများပြားလာပြီဖြစ်ပါသည်။
မတူညီသော Browser များ ၊ စက်ပစ္စည်းများ ၊ မတူညီသော Brandwidth နှင့် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ၊ အခြား အကျွမ်းတဝင်မရှိသောယဉ်ကျေးမှုများတွင် Website ကြည့်ရှုခြင်းများအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ကောင်းမွန်သော Website များနှင့် client များ၏လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန်Website များ မစတင်ခင် အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်အား အထူးဂရုစ်ိုက်ပေးရပါမယ်ရှင့်။
client ဘက်မှ လိုချင်သော အချက်များအား အသေးစိတ် ဂရုစိုက်နားထောင်ပေးရန်
project အတူလုပ်မည့် designer ၊ coder များသာမက အတူ လုပ်ဆောင်မည့် Member များအားလုံး နှင့် Project ၏အကြောင်းအရာ အားလုံး ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု ရှိစေရန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် client ဘက်မှလိုချင်သော အချက်များအား checklist ထုတ်၍မှတ်သားထားရန် လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်။
ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်း နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော စာဖတ်ခြင်းလမ်းညွှန်များ
ဥရောပဘာသာ စကားအများစုမှာ Website များကို ဘယ်ဘက်မှ စတင်ဖတ်ကြသော်လည်း အာရှဗစ် နှင့်ဟီးဘရူး ဘာသာတွင် အခြားဘက်မှ ဖတ်ကြသည်။ Japanese တွင် အရေးကြီးသော စာသားအချို့ကို ဒေါင်လိုက်နေရာချပြီးအပေါ်မှအောက်သို့ ဖတ်ကြသည်။ မိမိ၏​ Web Page အားမတူညီသောနိုင်ငံများတွင် ဖွင့်နိုင်ရန် အထက်ပါ ကွဲပြားသောစာဖတ်ခြင်းနှင့် ဘာသာစကားမတူညီမှု Problem များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
HTML5 coding for accessibility
ထို့အပြင် Web အသုံးပြုဆက်သွယ်သူများ code standards နှင့် ပြည့်စုံသော Website များ ရရှိရန် HTML5 ၏element များအား လည်း W3C (World Wide Web Consortium) မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
Web Pageတစ်မျက်နှာတွင် h1 element တစ်ခုသာရှိရပါမည်။
များသောအားဖြင့်တစ်မျက်နှာလျှင် h2 element တစ်ခုထက်ပိုပါသည်။
h3, h4, h5, and h6 headings များကိုသုံး၍ ခေါင်းစဉ်များကိုထပ်မံခွဲပါ။
unordered lists အတွက် ul tags ၊ order list အတွက် ol ကိုအသုံးပြုပါ။
HTML နှင့် CSS ကို ရှင်းလင်းစွာ coding ရေးပေးပါ။
ပုံတစ်ခုတင်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါအမှားသတင်းတစ်ခုအစား alt စာသားကိုပြသနိုင်သဖြင့် alt nameကို image tag များတွင်ထည့်ပေးပါ။
ထိုသို့ HTML5 coding များအား သင့်လျော်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် Website အသုံးပြု မည့် user များအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များအား ဖော်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
များသောအားဖြင့် Browser တွင် ဖော်ပြထားသော စာလုံး font များ သည် PC တွင် တပ်ဆင်ထားသော font များ (device font) များကို ကန့်သတ်ထားမှုများရှိပါတယ်ရှင့်။ထို့ကြောင့် မိမိ၏ PC တွင် instrall လုပ်ထားသော Font များနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားသော Web Page များသည် Browser Environment ပေါ် မူတည်၍ Font ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း problem များရှိတတ်သောကြောင့် ထို problem အား ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းပညာမှာ Web Font ဖြစ်ပါတယ်။
Web font ဆိုတာဘာလဲ?
Web Font ဆိုသည်မှာ Web ပေါ်မှ font များကို download ပြုလုပ်၍ Web Page တွင် ပြသသော နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
Web Font စာလုံး များတွင် တစ်ချို့ Web Font များ က design မြင့်မားတဲ့ အတွက်ကြောင့် image များနှင့်ဆင်တူသော်လည်း character များသာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံး SEO အကျိုးသက်ရောက်မှု များရရှိနိုင်သလို CSS ဖြင့် color နှင့် အရွယ်အစား ကို ပုံမှန် စာသားများကဲ့သို့ ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
Web fonts များမှာ အမျိုးမျိုးသော အားသားချက်များ ရှိပင်မယ့် လည်း လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာတော့ သတိပြုရမည့်အချက်များလည်းရှိပါတယ်။
Web Fonts များကို dynamically ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလျှင် internet setting နှင့် browser environment ပေါ်မူတည်၍ Website စတင်ပြသသည့် အချိန်တွင် loading Time ကြာမြင့်ခြင်း၊ Web font support မပေးခြင်းအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
Website စတင်ပြသသည့် အချိန်တွင် Browser နှင့် စက်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ font များ၏ line height အကွာအဝေး မတူညီခြင်း ၊ Font စာသားနှင့် တည်နေရာအနေအထား layout ပျက်ခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ရှင့်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် Web Developer များနှင့် Designer များသည် Website သုံးစွဲသူ user ၏အခြားအခြေနေများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်အတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူအလျင်အမြန် ရှာဖွေရန်လိုအပ်သူများ သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်တောင်းခံသူများကို စာနာထောက်ထားမှုနှင့် အဘက်ဘက်မှ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ပေးရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ရှင့်။
ညီမတို့ Spiceworks Myanmar Company မှလည်း ကောင်းမွန်သော Websites များနှင့် Client များ၏လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ Website များအား ဖန်တီးပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Previous Post:Human Brain Wave and Meditation
Next Post:Cyber Attack